ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဖီးဒါများ | တိုယိုတာဖီးဒါကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl white Toyota Fielder 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် NZE161-7038438) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Pearl white Toyota Fielder 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ZRE162-7001407) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...
Pearl white Toyota Fielder 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ZRE142-9169918) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...
Pearl white Toyota Fielder 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် NZE141-9193196) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Powe...
Silver Toyota Fielder 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl White Toyota Fielder 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Toyota Fielder 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Gold Toyota Fielder 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Fielder 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 240 အစိုးရအခွန်အခများပါဝင်ပြီး
Black Toyota Fielder 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Fielder 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
White Toyota Fielder 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Silver Toyota Fielder X 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျ...
Toyota Fielder XG 2009
Lks 229 ညှိနှိုင်း
Blue metallic Toyota Fielder XG 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးက...
Silver Toyota Fielder 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
ပြည်တွင်းက တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါများ
စတေရှင် ၀ဘ်ဂါန်ထဲက လူကြိုက်များတဲ့ တိုယိုတာ ဖီဒါများ
တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါများဟာ ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများတဲ့ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုလာရဲ့ စီးရီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန် ပုံစံရှိတဲ့ ကိုရိုလာရဲ့ ကားအမျိုးအစားကိုတော့ ဂျပန်မှာ ကိုရိုလာ ဖီဒါတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ကိုရိုလာ ဖီဒါ မော်ဒယ်တွေကနေပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်လောက်ထိတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေလံမှာတော့ ၂၀၁၃ နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွေကို အတွေ့ရများနေပါတယ်။ ကား ဆိုဒ် ကိုယ်ထည်က ကျယ်ဝန်းတဲ့ အတွက် လူစီးရော ပစ္စည်းတင်ဆောင်မှုတွေမှာရော အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်နှစ်ကိုလိုက်ပြီး ရုပ်ထွက်ကွဲပါတယ်။ ၂၀၁၃နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရုပ်တွေဆို တော်တော် ရုပ်ထွက် ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကားဈေးကွက် အခြေအနေအရတော့ တိုယိုတာ ဖီဒါတွေကို အရောင်း အ၀ယ်ဈေးကွက် ငြိမ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ S လီမီတက် နဲ့ အခြား X လီမီတက်ကဲ့သို့ မော်ဒယ်ကွဲများကို နှစ်အလိုက် ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅၀၀ စီစီကနေစပြီး အင်ဂျင်ပါဝါကို ရရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ၂၂၀၀ စီစီထိကို ရနိုင်ပါတယ်။ အော်တို၊ ဓာတ်ဆီတွေကို အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ရှေ့အင်ဂျင်၊ ရှေ့ ဘီးမောင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ၁၈၀၀ စီစီမှာ ဆလင်ဒါ (၄) လုံးထိုးကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စူပါ စီဗီတီ အင်ဂျင်ကို သုံးပြီး နှစ်ဘီးမောင်းတွေကို ရသလို လေးဘီးမောင်းတွေကိုလည်း ၇နိုင်ပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီမှာလည်း လေးဘီးမောင်း၇ပြီး ၁၈၀၀ စီစီမှာလည်း လေးဘီးမောင်းရပါတယ်။
၂၀၀၈ ဒီဇိုင်းရှေ့ပုံစံနဲ့ ၂၀၀၂ မော်ဒယ်တွေမှာ ပုံစံကွဲပါတယ်။ ရှေ့က မီးလုံး ၊ ဇကာပေါက်ကအစ ကွဲပြီး မီးလုံးထဲမှာ ရှိတဲ့ မီးသီးတွေလည်း ဆင့်ကဲ့ ထပ်ကွဲပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာတော့ သိပ်ကြီး ကွာသွားတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်တွေမှ ကား ဂီယာဘောက်နဲ့ ဒတ်ရ်ှဘုတ်နေရာတွေကို ကာဗာတွေ အရောင်တွေနဲ့ ဖြစ်သွားခြင်းပါ။ မော်ဒယ်မြင့်တွေမှာ ဒီဇိုင်းကို မြင့်တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်မှာမှ ရှေ့ဖက်နဲ့ ကိုယ်ထည်ကို အလှပုံစံ ပြန်လည် ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဖီဒါတွေက အတွင်းဖက်မှာ သန့်ပြန့်ပြီး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ လူ(၅) ယောက်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထိုင်စီးနိင်ပါမယ်။ တီဗီနဲ့ ရေဒီယို ဘောက်များအတွက် နေရာများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေ ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီဒါလေးတွေမှာ အတွင်းခန်းကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အနောက်ဖက် က ပစ္စည်းတင်တဲ့နေရမှာ ကျယ်ဝန်းပြီး ဇိမ်ခံကား အနေနဲ့ စီးနင်းနိုင်တဲ့ အပြင် ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မော်ဒယ်ကနေ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်လောက်ထိကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ရောင်းဝယ်မှု အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ နဲ့ ဌင်းအထက် မော်ဒယ်တွေကိုတော့ လေလံမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ နဲ့ ၁၆၀ ကနေ ၁၈၀ လောက်ထိကို ရှိပါတယ်။ မော်ဒယ် များရှိ ကားဂရိတ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေ ကွာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်စီးကားကိုမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ အနောက်ခန်းကျယ်ကျယ် လိုအပ်သူများ အတွက် တိုယိုတာ ကိုရိုလည ဖီဒါတွေဟာ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အထူးကောင်းမွန် သပ်၇ပ်တဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။